Daahidda Awoodda Eebbe ee Salaadda, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Dadku fikrado badan ayey ka qabaan Ilaah badankoodna ma ahan run inay run yihiin. Haddii caddaynta Tozer ay sax tahay oo fikirkayaga ku saabsan Ilaah uu qaldan yahay, markaa waxa noogu muhiimsan sidoo kale waa khalad. Khaladaadka aasaasiga ah ee ka fekerista Ilaah waxay noo horseedi kartaa inaan ku noolaano cabsi iyo dambi oo aan u horseedo kuwa kale inay si khaldan uga fikiraan Ilaah.
Waxaan ka fikirno tukashada waxay wax badan ka sheegtaa waxa aan ka fikirno Ilaah. Haddii aan u maleynno in ukunta salaadda inay tahay aaladda wax laga helo Eebbe, aragtideena ku saabsan Ilaah waxaa loo yareeyay sanduuqa rabitaanka jannada. Hadaan isku dayno inaan ganacsi la sameyno Ilaah, Ilaah wuxuu noqon doonaa ganacsade u furan gorgortanka kaasoo aan dhawrin heshiisyada iyo ballanqaadyada. Haddaan eegno duco nooc ka mid ah raalli gelinta iyo dib-u-heshiisiinta, markaa Ilaah waa wax yar oo sabab la'aan ah waana inuu ku qanco dalabkeenna kahor inta uusan wax noo qaban. Dhamaan aragtiyadan ayaa Ilaahay hoos ugu dhigaya heerkeenna isla markaana u yareeyaan qof ku qasban inuu u fikiro oo u dhaqmo sida aan u dhaqanno - oo ah Ilaah ka sameeyay aragtadeena. (sax) duceeya, waxaan sii deyn laheyn awooda Ilaah ee nolosheena iyo adduunkaba. Sida muuqata waxaan ilaahay ka celineynaa oo xitaa ka horjoogsanayna inuu ficil sameeyo haddii aanaan si wanaagsan u baryin ama haddii dembigu jidkayaga ku taagan yahay. Fikirkaan ma ahan oo keliya sawirka qariibka ah ee ilaah ku jira silsiladaha, kaas oo ay hubinayaan xoog badan oo awood badan, laakiin sidoo kale waa culeys weyn garbahayaga. Annaga ayaa mas'uul ka ah haddii qofka aan u duceyney uusan bogsaneyn waana qalad noo leeyahay haddii uu qof shil galo. Waxaan dareemaynaa masuuliyad hadii waxyaabaha aan rabno iyo damacyadu aysan dhicin. Ahmiyaddu kuma sii saarantahay Ilaah, laakiin salaadda oo loo beddelo duco si isku-dadaal ah.
Baybalku wuxuu ka hadlayaa ducada naafada ah ee guurka (1 Butros 3,7), laakiin maahan Ilaah, laakiin annaguba, maxaa yeelay badanaa way nagu adag tahay inaan duceysano shucuurtayada awgood. Ilaah nagama sugayo inaan dhahno salaadaha saxda ah si uu u dhaqmo. Isagu ma aha aabbaha carruurtiisu waxyaalo wanwanaagsan u diida ilaa ay ka hadlaan "erayga sixirka", sida aabbuhu u sugayo inuu maqlo "fadlan" iyo "mahadsanid" cunugga. Ilaah wuu jecel yahay inuu maqlo salaaddayada. Isagu wuu maqlaa oo wuu la shaqeeyaa mid kasta oo inaga mid ah, iyadoo aan loo eegeyn inaan helno jawaabta aan rabno iyo haddii kale.
Markii aan ku korayno aqoonta nimcada Ilaah, sidoo kale aragtideena xagga isaga ah. Markii aan wax badan ka baranno isaga, waxaan u baahan nahay inaan taxaddarno oo aan tixgelinno wax walba oo aan ka maqalno isaga oo ah runta ugu dambeysa, laakiin bayaannada ku saabsan Ilaah, runta ee Kitaabka Quduuska ah. Waxaa muhiim ah in laga warqabo in fikradaha qaldan ee Ilaah laga qaato ay ku badan yihiin dhaqanka caanka ah iyo kuwa Masiixiyada isla markaana isu dhigaan isu-ekaansho run ah.
Ilaah wuu jecel yahay inuu maqlo salaaddayada. Isaga dan kama gelin haddii aan adeegsanno ereyada saxda ah. Wuxuu ina siiyay haddiyadda tukashada si aan ula xiriirno isaga xagga Ciise Ruuxa Quduuska ah.